Home » Creative Writing » အီကိုကျကျ ဒီဇိုင်းအလှ (Part 3) – အရောင်များနဲ့ ပွါးများခြင်း Colours
အောက်ပိုင်း အဆင်နဲ့ဆို အပေါ်ဗျောင်၊ အပေါ်ပိုင်း အဆင်နဲ့ဆို အောက်ပိုင်းဗျောင် စသည်ဖြင့် လမ်းရိုး အတိုင်းပဲ လိုက်ပါတယ်။ မလှရင်တောင် ကြည့်ရမဆိုးဘူးလေ။
အဲ။ အရောင်ကွဲရင်တော့ ၂ ရောင်ထက်ပိုမဝတ်မိအောင်ကြိုးစားရပါတယ်။ ၂ ရောင်ကိုတောင် လူကို အထက်အောက် တစ်ဝက်ဆီ ခွဲထားသလို အဝတ်အစားမျိုးရှောင်တယ်။
ဖိနပ်နဲ့ အောက်ပိုင်းအဝတ်အစား အရောင်ကွဲရင် ကြည့်ရဆိုးလို့။
အရောင်ကို အင်္ကျီမှာပဲ စိတ်ကြိုက်ရွေးပါတယ်။
အာ့လောက်ပဲ ကြိုက်တယ်။ အောက်ဘက်က ပုံလို ကာလာ အများကြီး ကွန်ဘိုင်နေးရှင်း ဟာမျိုးတွေတော့ ရှောင်တယ်။ ကိုယ်က အရပ်သူမို့ မိတ်ကပ်နဲ့ တခြားအဆင်တန်ဆာတွေ မလိုက်နိုင်လို့။
Great for pink coat က နောက်ဆုံးအရောင်ဆိုတော့ကာ အပြာနုနဲ့ မလိုက်ဆိုတဲ့သဘောမို့ အဲ့ ထဲက တရောင်ရှာရမယ်သဘောဖြစ်ပြီ။ အပေါ်ထပ်ဝတ်တာလေးကို ဈေးကြီးကြီး ပေး မဝယ်ချင်ဘူးကွယ်။ ပုဝါနဲ့လည်း ခေးမေဆိုတော့ ခေးတွေက ဟိုဆွဲ ဒီဆွဲ နဲ့ မို့ အရူးမနဲ့ တူသွားမှာ။ :O အဲ့အတွဲ အစပ်လေးပဲကူးသွားပြီ။
အရောင်အစပ်တွေ ဘယ်လိုပဲ မတွဲစပ်တတ်ပါစေ မလိုက်ပါစေ အနည်းဆုံးတော့ လက်ကိုင်အိတ်နဲ့ ဖိနပ်တော့ အရောင်တူပါစေတဲ့ အဲ့ဒါဆိုရင်လည်း ဖက်ရှင်ကျပါသတဲ့ အမ ဖတ်ဖူးတာ။ အရင်ကတော့ ဖိနပ်ဆို အနက်ပဲ ဘာနဲ့တွဲတွဲ မလိုက်ဖက်မှာ မပူရဘူး။ ကိုယ်က မင်းသမီး မဟုတ်တော့ ရောင်စုံမှ မ၀ယ်နိုင်တာ. မလိုက်ဖက်ပဲလည်း မ၀တ်ချင်ဘုး။ ခုတော့ လက်ကိုင်အိတ်နဲ့ ဖိနပ် အရောင် ခပ်ဆင်ဆင်ဝယ်ပြီး ၀တ်တယ်။ မဟုတ်ရင် ဖိနပ်က အနက်ကြည့် မဒါဝတ်ဖြစ်နေလို့။
အပြာနု ဆို ပန်းးနု နဲ့ လိုက်ပါတယ် အမရေ
လက်ရှိ ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း နဲ့ အခြေအနေမှာ
ဒေါ်ဇီဇီ ကလေး လူများမှား နေလားကွယ်။
သူကြီး များလား? ကျော်သူ စတိုင်နဲ့။
ပုံပြန်ရှာတာ မတွေ့တော့လို့ အရီးရဲ့။
အဖြူရောင်နဲ့အနက်ရောင်ကိုကြိုက်ဆုံးပေမဲ့ တခါတလေ အရောင်လွင်လွင်လေးတွေ စုံနေအောင်ဝတ်ရတာ သဘောကျတယ် ပန်းရောင်ပွင့်ရိုက်ကာလာပြေပြေလေးကို စကပ် အပြာပွင့်ရိုက်ပြေပြေလေးနဲ့တွဲ ဝတ် ဖိနပ်ပန်းအပြာစပ် နာ့မှာရှိဖူးတယ်ချစ်စရာလေး အာ့နဲ့တွဲဝတ် အိတ်အကြိုးရှည်ရှည်လေးလွယ် ရောင်စုံပန်းခင်းလေးကျ ကွကိုယ်ထင်တာ
စလူးမဒေ နာ့ ကို ပြောဒါ။
များဒို့က စလစ်ဘလစ်တီ မဟုတ်တော့
အရောင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ဘိုဆန်တယ်လို့ ပြောလို့ရတဲ့ အရောင်တွေကို ကြိုက်ပါတယ် …
အရောင်တွေထဲ အဖြူ နဲ့ အနက်အကြိုက်ဆုံး ကျန်တာ အရောင်မှိန်မှိန်တွေပဲကြိုက်တတ်တယ်။ မိန်းခေးအသားပေး ပို့စ်မို့ ဘာမှ သိပ်မမန့်တော့ဘူးရယ်။
မ၀ံ့မရဲ နဲ့ ၀င်ပြောကြည့်မယ်ဗျာ…။